के हो प्रोस्टेट ग्रन्थी ? कस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ प्रोस्टेटको समस्या ? « Drishti News – Nepalese News Portal
१० पुस २०७८, शनिबार 3:25 pm
प्रोस्टेट ग्रन्थी पुरुषमा मात्रै पाइने एक प्रकारको ग्रन्थी हो । यो पुरुष ग्रन्थी बृद्धि हुँदा प्रोस्टेटको समस्या देखापर्ने गर्दछ । यो ग्रन्थीमा समस्या हुनाले लगतै आफ्नो स्वास्थ्यमा विचार नगरे निम्न समस्या देखिनसक्छ ।
२.PSA जाँच गन
समस्या हुनेले डाक्टरको निगरानीमा रहने गर्नु पर्दछ । माथिको कुनै लक्षण देखा पर्ने बितिकै चिकित्सकीय परामर्श लिएर दैनिक औषधीको प्रयोग गर्ने, औषधीको दैनिक प्रयोग गर्दा पनि केही सुधार आएन भने अप्रेसन गर्ने, अप्रेसनको धेरै बिधीहरु रहेका छन् । जसमा चिरेर निकाल्ने जुुन निकै पुरानो प्रवृधी रहेको छ । दुरबिनको माध्यमबाट कहि चिरफार नगरि खुर्कन वा लेजर प्रविधिबाट अप्रेसन गर्ने ।
प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको लक्षण देखिएमा हामी सुरुमा रगत जाँच गर्नुपर्छ । भिडियो एक्सरे गर्नु पर्दछ । यसका साथै पिसाबको फेर्दाको बेगलाई जाँच गर्ने त्यसपछि पिसाब परीक्षण र वीर्य जाँच गर्ने, रोगको किटान भएपछि हामीले उपचारको विधी रोज्ने गर्नु पर्दछ । औषधिले हुनेसम्म त्यहीबाट समाधान खोज्नु पर्छ । यसबाट नहुने अवस्थामा शल्यक्रिया पनि रोज्नु पर्ने हुनसक्छ । प्रोस्टेट क्यान्सर भएको अवस्थामा कुन अवस्थाको छ र कति मात्रामा फैलिएको छ विचार पुर्याउनुपर्छ । त्यसअनुसार नै अप्रेशन वा रेडियो केमोथेरापी गर्ने तय हुन्छ ।
निरोगी जीवनका लागि हाम्रो सक्रियता र शारीरिक व्यायाम आवश्यक पर्छ भनेजस्तै प्रोस्टेट ग्रन्थीमा समस्या आउन नदिन नियमित शारिरीक सम्पर्क (हप्तामा ३ पटक) हुन जरुरी छ । लामो समयसम्म स्खलन भएन अथवा सञ्चय भइरह्यो भने प्रोस्टेटको समस्या हुन्छ ।
अततः तपाईहरुलाइ यस सम्बन्धी कुनै पनि समस्या देखापरेमा एभरेष्ट अस्पतालको कल सेन्टरको नम्बर ०१-४७९१२९४/४७९३०२४/४७९५१७७ मा सम्पर्क गरेर आफ्नो नाम अग्रिम टिपाउन सक्ने सुविधा समेत उपलब्ध छ ।